ဇော်ဂျီ-ယူနီကုဒ် 5.1 ပြောင်း Box ထည့်ခြင်း | м м ť ђ ĩ ŋ ķ є я ကိုသင်ကာ
ဇော်ဂျီ-ယူနီကုဒ် 5.1 ပြောင်း Box ထည့်ခြင်း	Posted by mm thinker on September 2, 2008
Posted in: IT & Blogging, Unicode.	Tagged: IT & Blogging, Unicode.	Leaveacomment
Blogspot သုံးသူတွေ အတွက်ကတော့ Head နဲ့ Body ကြားမှာ ပုံမှာပြတဲ့ အတိုင်း ကုဒ်လေး ထည့်ပေးရပါမယ်။
ကျနော့်ရဲ့ Blogspot မှာ အစမ်းလုပ်ထားတာကို ဒီဘလော့ဂ်မှာ ကြည့်ပါ။
WordPress ကို Run ပြီး သုံးသူတွေကတော Page Template, Main Index Template ထဲမှာ ထည့်ရပါမယ်။ ပုံမှာ ပြထားပါတယ်။
အခုစမ်းတဲ့ဟာက mmthinker.net မှာ မြင်နေရတဲ့ ဘောက်စ်ကလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီဘောက်စ်ကလေး ပျောက်နေစေချင်ရင် ဘောက်စ်မှာပါတဲ့ Cross လေးကို Click ပါ။ ပြန်ပေါ်စေချင်ရင် Refresh ဖြစ်စေ၊ F5 ဖြစ်စေ လုပ်လိုက်ပါ။ ဘောက်စ်တပ်ပြီးတဲ့နောက် စမ်းကြည့်တဲ့အခါ စာလုံးတွေဟာ ဖွာတာတာဖြစ်နေတယ်၊ ဟထိုးတွေ အသတ်တွေ ရွေ့နေတယ်ဆိုရင် အောက်မှာပေးထားတဲ့ Myanmar3 ကှိုInstall လုပ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် HTML ထဲက Font Family မှာ ရှိပြီးသား Zawgyi အပြင် ဘေးမှာ Myanmar3 လို့ ထည့်လိုက်ပါ။ ရှင်းလင်းစွာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
စမ်းသပ်သုံးစွဲပြီး အကြံဥာဏ်များကို Myanmar Font Converter မှာ ဖြစ်စေ၊ ဒီဘလော့ဂ်မှာဖြစ်စေ ပေးကြပါလို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။ လိုအပ်တာတွေ ထပ်မံဖြည့်သွင်းနိုင်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
– How to put Convertor Combo Box နဲ့ How to put Converter box in WordPress ကို ပြန်ရေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
– ဒီ Box ပြုလုပ်ခြင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး It’s first Off-Line On-the-Fly Myanmar Fonts Converter by The The Aye (Solveware) and Soe Min @ Mark လို့ ရေးထားတာလည်း တွေ့ရပါတယ်။
– Myanmar3ဒေါင်းလုဒ် လုပ်ရန် Click Here or Click Here
← ဇော်ဂျီ၊ ယူနီကုဒ် 5.1 နှင့် နောက်ကွယ် ပြဿနာများ	ဘန်းရေစက် →	LeaveaReply Cancel reply	Enter your comment here...